लिसिप्रिया कन्गुजम: को हुन् यी बालिका जसले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको ‘सम्मान’ अस्वीकार गरिन् ! « Online Tv Nepal
लिसिप्रिया कन्गुजम: को हुन् यी बालिका जसले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको ‘सम्मान’ अस्वीकार गरिन् !
Published :9March, 2020 8:58 am
“प्रिय नरेन्द्र मोदीजी, यदि तपाईँले मेरो आवाज सुन्नुहुन्न भने कृपया मलाई बधाई नदिनुहोस्। प्रेरणादायी महिलाहरूमा मलाई पनि राख्नुभएकोमा धन्यवाद। कैयौँ पटक सोचेपछि मैले यो सम्मान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेँ।” यसरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने आठ वर्षीया बालिका लिसिप्रिया कन्गुजम हुन्।
लिसिप्रिया भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरकी हुन्। उनी पर्यावरणसम्बन्धी मुद्दामा निकै सक्रिय छिन्। उनी सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बाल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित भएकी थिइन्। भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा ट्विटरमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाहरूको नाम प्रस्तुत गरिरहेको छ।
उनले प्रधानमन्त्री मोदी र सांसदहरूसँग जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन माग गरिरहेकी छन्।
लिसिप्रियाको प्रतिक्रियाप्रति सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आएका छन्।
केहीले उनको ‘आँटिलो’ टिप्पणीको प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले उनलाई भ्रममा राखिएको बताएका छन्।
केहीले त्यो ट्वीट उनले लेखेकोमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
ट्विटरमा उनको परिचयमा सो खातामा उनका अभिभावकद्वारा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।
केहीले उनले भारत सरकारको अपमान गरेको धारणा राखेका छन्। उनको तुलना स्वीडनकी वातावरण अभियानकर्मी ग्रेटा टून्बेर्गसँग पनि गरिन्छ। तर लिसिप्रियाले त्यो मन पराउँदिनन्। उनी आफ्नै परिचय भएको बताउँछिन्। उनले ट्विटरमा आफूलाई ‘एक बेघर पर्यावरण कार्यकर्ता’ भनेकी छन्। बीबीसीमा ओ खबर छ ।